Bar-barihii Liverpool la gashay Man City oo laga diiwaangaliyay Xaqiiqooyin kala duwan. | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Bar-barihii Liverpool la gashay Man City oo laga diiwaangaliyay Xaqiiqooyin kala duwan.
Bar-barihii Liverpool la gashay Man City oo laga diiwaangaliyay Xaqiiqooyin kala duwan.
kooxda Liverpool ayaa caawa garoonkeeda bar-baro 2-2 kula gashay kooxda Man City kulan u muuqday midka ugu xiisaha badan Todobaadkan Premier league marka la eego in afar gool leeska dhaliyay.
Natiijadaasi kadib waxaa jira dhacdooyin laga diiwaangaliyay labada kooxood ee ku loolamaya horyaalka sanadkan.
Liverpool ayaa kaliya ku guuleysatay inay ka badiso Manchester City mid ka mid ah toddobadii jeer ee ugu dambeysay Premier League (3 Barbaro iyo 3 Guuldarro), waxaana laga dhaliyay 14 jeer dhammaan toddobadaas kulan.
Manchester City ayaa laga dhaliyay caawa goolal ka badan (2) in ka badan todobadii kulan ee hore ee Premier League marka la isku daro (1), halka ay la kulmeen afar darbo oo bartilmaameed ah kulankii Liverpool, kaliya labo ka yar ayaa laga dhaliyay lixdii kulan ee kale ee Premier League marka la isku daro xilli ciyaareedkan (6).
Mohamed Salah ayaa dhaliyay (9) ama caawiyay (3) sideed ka mid ah sagaalkii kulan ee uu u saftay Liverpool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isagoo si toos ah ugu goolal badan ilaa iyo haatan 2021-22 marka loo eego ciyaaryahan kasta oo Premier League ah (12).
Liverpool ayaa heshay hal darbo oo kaliya qeybtii hore, waana tii ugu yareyd 45-kii daqiiqo ee ugu horreysay kulan Premier League ah oo ka dhacay Anfield tan iyo bishii Janaayo 2017 oo ay la ciyaareen Chelsea (sidoo kale hal darbo), kulankaas oo ku dhammaaday 1-1.
Ka dib markii uusan wax gool ah dhalin saddexna caawiyay lix kulan oo Premier League ah oo uu ka horyimid Liverpool, Kevin De Bruyne oo Man City ah ayaa hadda sameeyay (2 gool, 2 caawin) saddex kamid ah afartiisa kulan ee ugu danbeesay.
Mohamed Salah ayaa haatan shabaqa soo taabtay 7 kulan oo xiriir ah tartamada oo dhan, isagoo barbareeyay goolashiisii ​​ugu fiicnaa abid ee Liverpool, isagoo sidaas sameeyay markii ugu horeysay tan iyo bishii April 2018.
Previous articleLiverpool 2-2 Manchester City, labada Kooxood oo ku heshiiyay Qeybsiga Dhibcaha
Next articleGuardiola oo ka hadlay Qaladkii James Milner ee uu ka Carooday
Muqdisho (Caasimada Online) –Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa ku guuleystay kursigii uu maanta u tartamay ee doorashadii Aqalka Sare, saacado kadib markii...